Tongedza ruvara rwePhilips Hue yako kuratidza iwo iwo mavara akafanana neako Mac | Ndinobva mac
Tongedza ruvara rwePhilips Hue yako kuratidza iwo iwo mavara akafanana neMac yako
Pese apa uye ipapo tinosangana nechikumbiro chisinganzwisisike uye isu tinomira kufunga kuti iye anovandudza anogona kunge akayambuka pfungwa dzake kuti aite chiratidzo chakadai. Zvisinei, kazhinji isu tinowana zvinonakidza uye zvepakutanga zvinoshandiswa senge yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino.
Ambient Chiedza - Philips Hue Movie Sync inotibvumidza kuyananisa ruvara rwePhilips Hue mababu ane iro rakanyanya ruvara izvo zviri kuratidzwa pari zvino pachiratidziro cheMac yedu, chishandiso chakanakisa icho chichatibvumidza kunyatsozvinyudza isu muvhi yatiri kutarisa, zviri pachena kana iri bhaisikopo kana nhevedzano.
Chiedza cheAbient chine algorithm inoongorora iro rakanyanya kuwanda pane yedu Mac skrini mune chaiyo nguva, kagumi pasekondi, uye rwoga rinotumira kune Philips Hue mababu. Nenzira iyi tinokwanisa kubatanidza Mac yedu kuTV, toisa Philips Hue bulb padhuze uye gadzira iyo nharaunda yakakwana kuti unakirwe edu epamoyo mafirimu kana akateedzana Ichi chishandiso chinotibvumidza isu kumisikidza kumhanya kweshanduko pamwe nekupenya kuitira kuti mwenje mumba usapesane kana tichiushandisa. Parizvino zvese zvakanaka.
Nekuda kwematambudziko ne DRM, kana tikashandisa application kunakirwa neNetlix, iko kunyorera hakushandi. Chimwe chinhu chakashata ndechekuti nekuda kwekukanganisa kweyemaficha ePhilips Hue, zvinongogoneka kushandura ruvara rwemabhuru nekukurumidza mune smart bulb, kwete vese vari mukamuri imwechete. Zvirinani isu tinogona kushandisa mwenje padhuze neterevhizheni kuumba iyo Ambilight mhedzisiro iyo vakomana paPhilips patent vasina kutenga terevhizheni nyowani.
Ambient Chiedza - Philips Hue Movie Sync inowanikwa mahara paMac App Store asi inosanganisa kutenga mukati mayo. Inoda macOS 10.12 kana gare gare uye 64-bit processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Tongedza ruvara rwePhilips Hue yako kuratidza iwo iwo mavara akafanana neMac yako
tvOS 11 yave kuwanikwa paApple yeruzhinji beta chirongwa